Zimbabwe LGBTIQ+ Sector Reacts To The Cancellation Of Somizi's Visit To Zimbabwe - iHarare News
By Audrey L Ncube	 On Nov 5, 2021 3 minute read
Last updated on November 5th, 2021 at 01:39 pm
The Zimbabwe LGBTIQ+ sector has released a statement responding to the cancellation of South African socialite and celebrity chef Somizi Mhlongo’s visit to Zimbabwe.
Somizi Mhlongo was supposed to attend the official reopening of Garwe Restaraunt in Harare yesterday before he was blocked by conservatives and a number of churches in Zimbabwe.
Somizi’s invitation to grace the reopening of Garwe Restaurant sparked mixed reactions as religious bodies and conservatives called for Somizi to be blocked from entering Zimbabwe whilst open-minded Somizi’s fans were looking forward to seeing Somizi.
In a statement, the Zimbabwe LGBTIQ+ sector said they have observed with concern the shameful conservations and conduct around Somizi’s supposed visit to Zimbabwe.
They condemned the way some conservatives dragged and snubbed Somizi because of his sexuality.
The Zimbabwe LGBTIQ+ slammed specific organizations that mobilized for Somizi to be banned for erroneously representing the views of all Zimbabweans.
“Zimbabwe LGBTIQ+ sector statement on the cancellation of Somizi Mhlongo’s visit to Zimbabwe.